“Caasimadda waxaa dhib ku haya dhalinyarro kooxo u dagaalama dhawr iyo sodon ayaanu qabanay”… taliyaha booliska | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Caasimadda waxaa dhib ku haya dhalinyarro kooxo u dagaalama dhawr iyo sodon ayaanu qabanay”… taliyaha booliska
Hargaysa (SDWO): Guddi-hoosaadka arrimaha nabadgelyadda ee golaha Guurtidda Somaliland ayaa shalay kulan xog waraysiya oo la xidhiidha arrimaha nabadgelyadda dalka gaar ahaana caasimadda Hargaysa la yeeshay taliyaha ciidamadda booliska sareeye gaas C/laahi Fadal Iimaan.
Kulankaasi oo ka dhacay xarunta taliska guud taliska booliska ee magaaladda Hargaysa, ayaa taliyuhu waxa uu guddiga nabadgelyadda Guurtidda uga xog waramay xaaladda nabadgelyo ee caasimadda Hargaysa iyo hawl galadii u danbeeyay ee dhinaca sugidda nabadgelyadda ee ay ciidanku sameeyeen.
Sareeye gaas C/laahi Fadal, waxa uu faahfaahin ka bixiyay arrimaha amaanka caasimadda iyo hawl galadii ugu danbeeyay oo uu sheegay in dhibaatadda ugu weyn ay caasimadda ku hayaan dhalinyarro kooxo ah.
Waxaanu yidhi “Nin bani’aadam la raaciyay, oo rebesh uun loo diray, shaqadiisu daqiiqad ma leh, wakhti ma leh, saacad ma leh, fasax ma leh. Ciidanka boolisku way shaqaynayaan waanan u mahad celinayaa. Waxaanan aamainsanahay in ay yihiin naftood hureyaal bulshadda iyo qaranka Somaliland naftoodda u huray”.
“Caasimadda waxaa ka jirra kooxo dhalinyarro ah, oo koox koox u dagaalama, ilaa saddexdii sanadood ee u danbeeyay. Xalay (habeen hore) oo u danbaysay, dhawr iyo sodon dhalinyarro ah ayaanu qabanay oo ay ku jiraan qaar xukuman oo maqnaa ama la raadinayay, kuwaasoo saaka (shalay) xabsiga lageeyay.
Waxaana taa ka marag furaysa in idinka laftiinu aad habeenkii iyagoo ciidamadda is eryana ay iskula soo kiin galaan guryaha. Iyadoo marka la soo qabta-na ay waalidkoodu ku odhanayaan, innankaygu masaajid ayuu ka soo baxay oo uu ka soo eedaamayay” ayuu yidhi taliyaha booliska.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Dhalinyaradan kooxaha ah, waxay ku hubaysan yihiin Faashash iyo Mindiyo. Waxa kaloo ay samaysteen Tooshash aad nuurkoodu u badan yahay si ay ciidanka u wax yeeleeyaan oo ay u cawaraan, markay soo qabanayaan”.
Dhinaca kale taliyaha booliska ayaa fariin u diray waalidiinta caasimadda oo uu ugu baaqay in ay caruurtoodda ka war hayaan falalka ay ku jiraan. “Saddexdii maalmood ee u danbeeyay waxaanu ku qaadnay olole xoog leh, dhalinyarro badan ayaana la qabtay.
Waxaanu amar ku bixinay in xataa marka ninku ilmihiisa qabsan waayo, hadhow-na haddii wax ku dhacaan oo dhibaato gaadho wuxuu odhanayaa, booliska ayaa innankaygii wax yeelay, markaa waa in waalidku ay caruurtoodda qabsadaan.
Arrintaasi gacanta ayaanu ku haynaa, waxaanay ka mid tahay hawl maalmeedkayadaga caadiga ah. mana ay suurto gasheen in aanu qabano kuwan aanu sharciga hor gaynayno ee aanu qabanay, haddii aanaan ka hor tag la samaynin”ayuu yidhi sareeye gaas C/laahi Fadal.